Dagaalkii gobolka Tigray iyo dowladda dhexe ee Ethiopia oo galay maalintii seddexaad | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Dagaalkii gobolka Tigray iyo dowladda dhexe ee Ethiopia oo galay maalintii seddexaad
Dagaalkii gobolka Tigray iyo dowladda dhexe ee Ethiopia oo galay maalintii seddexaad
Kasokow baaqyada ka imanaya beesha caalamka, dawlada federaalka ee itoobiya waxay wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto gobolka tigree.
Muranka udhaxeeya Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xisbiga talada haya ee (TPLF) oo mar xukumi jiray dalka Itoobiya ayaa soo jiitamayay mudo bilo ah kadib markii kooxda TPLF ay qabatay doorashooyin gobaleedyo kadhan ah dowlada federalka.
In kasta oo uu sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad deegaanka Tigray, ayaa haddana labada aqal ee federaalka iyo baarlamaankuba waxay ansixiyeen in waqtiga loo kordhiyo xukumada maadaama uu dillaacay fayraska Covid-19, laakiin doorashadii gobolka Tigray ayaa sii murgisay.
Ra’iisul wasaare Abiyi ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka socda Tigray, asaga oo yiri “waxaa jira khasaarooyin badan, dhaawacyo iyo bur bur hantiyadeed“
Weerarkii lagu qaaday xarunta militariga federaalka. Arintaas ayuu ku eedeeyay xisbiga TPLF.
Kooxda TPLF ayaa horay ugu hanjabtay in ay ka go’ayso dalka iyadoo u cuskatay qodob ku jira dastuurka federalka ah oo ogolaanaya “aayo katashiga“.
“Dib ugama laabaneyno cid kasta oo dooneysa inay caburiso xaqeena aayo-ka-tashi iyo is-xukun,” ayuu yiri hogaamiyaha TPLF Debresion Gebremichael bishii Agoosto.
Bishii Oktoobar, dowladda federaalka waxay go’aansatay inaysan wax xiriir ah la yeelan Golaha Deegaanka ee Gobolka Tigreega iyo laamaha sare ee sharci fulinta, baarlamaankuna wuxuu xanibay kabidda miisaaniyadda ee Tigray.
Daawo warbixin kanaalka Adduunka TV uu ka diyaariye dhibaatada ka jirta Ethiopia.